လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေ နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့အခါ ဒါတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။ - Hello Sayarwon
Dr. Thin Yadanar @ Frances မှ ရေးသားသည်။ 19/11/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Gym စစချင်းသွားတဲ့ ပထမ အပတ်က အတော်ကြီး ဝေဒနာခံစားရတယ်ဆိုတာ gym သွားဖူးတဲ့ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ gym မှာတင်မဟုတ်ပါဘူး အိမ်မှာနေရင်းတောင် လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်နေရင် ပထမစစချင်းလုပ်တဲ့ အပတ်က အခံစားရဆုံးပါ။ အရင်လှုပ်ရှားမှု သိပ်မရှိခဲ့တဲ့ကြွက်သားတွေ gym ဆော့လိုက်တဲ့ အခါကျမှ ရောင်ရမ်းနာကျင်ကုန်လို့ ခြေတစ်လှမ်းလှမ်းတိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့သူချည်းပါပဲ။ လှေကားတက်တဲ့ ဆင်းတဲ့အချိန်ကတော့ အခံရဆုံးပေါ့။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း နာကျင်ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာတွေက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ ၂ ပတ်မြောက်လောက်ကျရင် သက်သာသွားမှာ ဆိုပေမယ့် စစချင်းအပတ်မှာ အတော်ခံထားရတော့ နောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို မလုပ်နိုင်တော့တာမျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။. ဒီတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြွက်သားနာကျင်ခိုက်ခဲတာတွေ အတွက် အဖြေရှာကြည့်ရအောင်။
( ၁ ) ရေခဲကပ်ပါ။ ရေနွေးကပ်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ကြွက်သားတို့ အဆစ်နေရာတို့ရောင်လာပြီး ကိုင်ကြည့်လိုက်လို့ ပူနေရင် ပုဝါတစ်ထည်ကို ရေခဲရေထဲနစ်ပြီး နာနေတဲ့ နေရာကို ၁၅ မိနစ်လောက်ကပ်ပေးပါ။
ရောင်ပြီးနီရဲနေတဲ့ လက္ခဏာမတွေ့ဘဲ နာပဲနာနေတာဆိုရင်တော့ ရေနွေးအိတ်ကို နာတဲ့နေရာပေါ် ၁၅ မိနစ်ကပ်ပေးပါ။ ရေပူနဲ့ ရေချိုးပေးလည်းရပါတယ်။
( ၂ ) အသာအယာ နှိပ်နယ်ပေးပါ။
ထိလိုက်တာနဲ့တင် နာမှန်းသိပေမယ့် တင်းနေတဲ့ ကြွက်သားတွေပြေလျော့အောင် ဖွဖွလေးဖိပြီး နှိပ်နယ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒဏ်ကြေ လိမ်းဆေးလေးလည်း လိမ်းပေးလို့ရပါတယ်။
( ၃ ) မရပ်လိုက်ပါနဲ့။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကိုက်ခဲနေတာပဲ မသွားနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီး လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခု အကျိုးရှိရှိ ထိရောက်ဖို့အတွက် အရေးအကြီးဆုံးက မရပ်ဘဲ ဆက်သွားနေတာပါ။
(၄ ) အနားပေးဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါသေးတယ်။
နားလိုက်ရင်ပိုနာတယ်ဆိုတဲ့ စကားကလည်း ရှိသေးတော့ မနားဘူးကွာ နာရင်နာပါစေ ဆက်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ နားလိုက်ရင် ပိုနာတယ်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အမှန်က အနားယူတာကြောင့် ကြွက်သားတွေ ပိုနာတာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြာကြီးနားလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်း လေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ်တဲ့အခါ အစကလို ဖြစ်သွားလို့ ကြွက်သားတစ်ခါ ပြန်နာတာကို ပြောချင်တာပါ။ ဒီလိုပြောလို့ မနားဘဲနေရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတာလည်း မဟုတ်သေးပါဘူး။ နာနေတဲ့ ကြွက်သားတွေကို အနားပေးဖို့ အချိန်လည်းလိုအပ်တာကြောင့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေစဉ် နားပေးရပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းကို ၄ ရက်လုပ် ၁ ရက်လောက်နားပေါ့။
( ၅ ) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတိုင်း အကြောလျှော့ခဲ့ဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
လေ့ကျင့်ခန်း ပြင်းပြင်းထန်ထန် လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်း ကြွက်သားတွေ အရမ်းနာကျင် ကိုက်ခဲတာမျိုး မဖြစ်ချင်ရင် လေ့ကျင့်ခန်းရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ အကြော ၁၀ မိနစ်လောက် လျှော့ပေးဖို့လိုအပ်သလို လေ့ကျင့်ခန်း မစခင်မှာလည်း သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ် ။
( ၆ ) အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး သောက်ပေးပါ။
ကိုယ်ကလည်း အစာအိမ်ရောဂါ မရှိဘူး ကိုက်ခဲနေတာတွေလည်း ဘယ်လိုမှ မသက်သာတော့တဲ့အဆုံး အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးသောက်ပေးလို့ရပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် နာကျင်ကိုက်ခဲတယ်ဆိုတာ ခဏတာပဲမို့ ဒါလေးအတွက်ကြောင့်နဲ့ ရေရှည် အကျိုးများမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကို မရပ်လိုက်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ ။ ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သူတိုင်း မေးတတ်ကြတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ ။ ။
လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင်ဘာတွေစားပေးသင့်လဲ။ ဘယ်အချိန်မှာ စားရမလဲ။ ။
ပြင်းထန်တဲ့ပြေးလွှားလေ့ကျင့်ခြင်း အပြီးမှာ ကြွက်သားနာကျင်မှုတွေကို ပျောက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းများ